OkMap, GPS नक्सा बनाउन र सम्पादन गर्नका लागि उत्तम। निःशुल्क - Geofumadas
OkMap, जीपीएस नक्साहरू सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्न उत्तम। निःशुल्क
सेप्टेम्बर, 2013 गुगल अर्थ / नक्सा, जीपीएस / उपकरण, पहिलो प्रभाव
OkMap सायद जीपीएस नक्सा निर्माण, सम्पादन र प्रबन्धका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो। र यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता: यो नि: शुल्क हो।
हामी सबैले एक दिन नक्शा कन्फिगर गर्न, एक छविलाई जियोरेफरेन्स गर्न, आकृति फाईल अपलोड गर्न वा गार्मीन जीपीएसमा किमीएलको आवश्यकता देखेका छौं। यी जस्तो कार्यहरू OkMaps को प्रयोग गरेर सरल मध्ये एक हो। यसको केही विशेषताहरू हेरौं:
यसले प्रायः डेटाको साथ डिजिटल भू-भाग मोडेल (डीईएम) सहित अधिकांश प्रयोग गरिएका ढाँचाहरूको वेक्टर डेटा समर्थन गर्दछ।
तपाईँ तहहरू टाइप गर्ने स्थानहरू, मार्गहरू र ट्र्याकहरू डेस्कटपबाट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि GPS मा अपलोड गर्नुहोस्।
भूकोडलाई समर्थन गर्दछ।
जीपीएस द्वारा कब्जा गरिएको डाटा कम्प्यूटरमा डाउनलोड गर्न र रिपोर्ट र तथ्याङ्कको विभिन्न रूपहरूमा तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्न डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
जीपीएसमा ल्यापटप जोडेर तपाइँ स्क्रिनबाट नेविगेट गरेर नक्सामा स्थिति जान्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईंको सञ्जालमा जडान छ भने तपाईले वास्तविक समयमा टाढाको डेटा पठाउन सक्नुहुनेछ।
यो Google Earth र Google नक्सामा जोडिएको छ, जसमा 3D को मार्ग डेटा सहित।
संकर फार्ममा jpg छविहरूमा पारदर्शिताका साथ किमीएल ढाँचाको अतिरिक्त, यसमा स्वचालित रूपमा गार्मीन पृष्ठभूमि नक्शा र OruxMaps ढाँचासँग मिल्दो किमीz ढाँचाहरू उत्पन्न गर्ने क्षमता छ। यसमा जियोरेफरेन्स्ड छविहरूको मोजेक र ईसीडब्ल्यू ढाँचा सहित, वेक्टर फाईलहरूको रूपमा जाने र किमीमेज कम्प्रेस गरिएको छविहरू टेस्लेट गरिएको छ।
ओकमैप द्वारा समर्थित ढाँचाहरू
रास्टर प्रारूप: tif, jpg, png, gif, bmp, wmf, emf।
डिजिटल टेर्रेन मोडेलले .hgt विस्तारलाई समर्थन गर्दछ, जुन नासा र NGA द्वारा विकसित गरिएको DEM हो। OkMap ले प्रयोग गर्ने ढाँचाहरू SRTM-3 हुन् जुनसँग second सेकेन्ड पिक्सेल, करीव3० मिटर र १ दोस्रो SRTM-१ जुन लगभग meters० मिटर छ।
DEM को साथ, OkMap ले अंक कब्जा गर्न को लागि तल माथि स्तर को ऊंचाई को प्राप्त गर्दछ, GPX फाइल को प्रत्येक बिंदु को सापेक्ष ऊंचाई को आवंटित; जसको साथमा एक अक्षांश चार्ट यात्रा मार्गमा निर्माण गर्न सकिन्छ।
DEM डाटा http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1 बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ
भेक्टर डाटाको सम्बन्धमा, OkMap ले GPX फाइलहरू लोड गर्न सक्दछ, जुन धेरै सामान्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनकि यो एक विनिमय मानक हो। यसले समर्थन गर्दछ, दुबै खोल्न र बचत गर्न:
Garmin नक्सा स्रोत gdb
गार्मिन नक्सा स्रोत एमपीएस
गर्मिन पीओआई डाटाबेस
गार्मिन पीओआई जीपीआई
समर्थित यन्त्रहरू, जसमा सबैले प्रयोग गरेर फाइल रूपान्तरण समावेश गर्दछ GPS Babel.
जीपीएस नक्साहरू सञ्चालन गर्न थप सुविधाहरू
कार्यक्रम आधारभूत देखिन्छ, तर वास्तविकतामा यो सबै केहिसँग राक्षस हो; यहाँ प्रयास गर्न केहि अन्य सुविधाहरू छन्:
गुगल अर्थमा भेक्टर र रास्टर प्रदर्शन
Google नक्शामा वर्तमान स्थिति खोल्नुहोस्
नक्शा सेवा, .okm ढाँचामा उत्पन्न गर्नुहोस्
छवि मोजाइक र ग्रिड जेनरेटर
उत्तरमा नक्शा को ओरन्ट गर्नुहोस्
रास्टर नक्शा बिट काट्नुहोस्
को रूपान्तरणको प्रयोग गर्नुहोस् GPS Babel
सर्वोच्च तह तहहरू बनाउनुहोस्, GPX, आकार फाइल, POI CSs (Garmin) र OzyExplorer मा
ठूलो समन्वय रूपान्तरण
दूरी र azimuth गणना
विभिन्न वेक्टर ढाँचाहरू बीचको रूपान्तरण
जीपीएसमा डेटा पठाउनुहोस्
मार्गमा नेभिगेसन, अडियो नोटिस समावेश गर्नका साथ
NMEA नेभिगेशन अनुकरण
यसमा स्पेनिश भाषा सहित धेरै भाषाहरू समावेश छन्।
सामान्यतया, जीपीएस नक्शा प्रबन्ध गर्न को लागी एक चाखलाग्दो समाधान। यद्यपि यसको उपयोगिता नेभिगेसन उद्देश्यको लागि जारी नै छ, समुद्री, माछा मार्ने काम, उद्धार सेवाहरू, जियोकोडिंग र अन्य जसको सटीकमा जोड दिईएको महत्त्वपूर्ण छैन जुन भूगोलको लागि कार्यक्षमता हो।
यो नि: शुल्क सफ्टवेयर होईन, यो प्रतिलिपि अधिकार हो, तर यो नि: शुल्क हो। यो केवल विन्डोजमा काम गर्दछ, र फ्रेमवर्क SP.। एसपी १ आवश्यक छ
OkMap डाउनलोड गर्नुहोस्
निम्न भिडियोले यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कसरी गार्मिन कस्टम नक्शा उत्पन्न गर्न दिन्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Geofumadas लाई बढावा गरेर भौगोलिकमा UTM टेम्पलेट कमाउनुहोस्
अर्को पोस्ट …अहिलेको लागी…अर्को »
एउटालाई जवाफ दिनुहोस् "OkMap, GPS नक्शा बनाउन र सम्पादन गर्नका लागि उत्तम। GRATUITOUS "
Gratuitous? नि: शुल्क संस्करणले तपाईंलाई व्यावहारिक रूपमा केहि गर्न दिदैन, त्यसैले निःशुल्क यसको लागि यसको क्रेडिटहरू छ ...